Kodzero-dzevanhu, 10 Ndira 2021
Svondo 10 Ndira 2021
Ndira 10, 2021
VaChamisa Voshora Kusungwa kwaVaSikhala, VaMafume naVaChin'ono Vachiti Hurumende Iri Kuvasvokosva
Mutungamiri webato rinopikisa reMDC Alliance VaNelson Chamisa vari kushora zvikuru hurumende nekusunga mutevedzeri wasachigaro webato iri VaJob Sikhala, meya weguta reHarare akamiswa basa VaJacob Mafume uye mutori wenhau VaHopewell Chin’ono.
Vagere kuMaruwa Vokurudzirwa Kupfeka Mamasiki Kuti Vazvidzivirire kuCovid-19
Kunyange zviri kukurudzirwa kuti vanhu vagare mudzimba, vapfeka mamasiki nguva dzose pamwe nekugara kure nakure, vakawanda kumaruwa havasi kutevedzera izvi.
VaTrump Vomanikidzwa nevamwe Kusiya Basa neNyaya Yekuda Kupidigura Hurumende Iri Kuuya
Nhengo dzakawanda dzedare reCongress muAmerica dziri kuti mutungamiri wenyika VaDonald Trump vanofanira kutorerwa matanho ekumanikidzwa kusiya basa sezvo vari kupomerwa mhosva yekupesvedzera vatsigiri vavo kuti vaite mhirizhonga.
Mutori weNhau, Hopewell Chin'ono, Oramba Ari Muhusungwa
Mutori wenhau anoshanda akazvimirira, Hopewell Chin’ono, akamiswa pamberi pedare ramejasitiriti nemusi weMugovera akasawaniswa mukana wekubvisa mari yechibatiso izvo zvapa kuti apedze wikendi ari mutirongo.
Ndira 08, 2021
Zviri Kuitika paBeitbridge Zvoshayisa Vakawanda Mufaro
Hurumende iri kukurudzirwa kuti igadzirise dambudziko riri kuenderera mberi paBeitbridge sezvo kuwanda kwevanhu panzvimbo iyi kuchigona kuwedzera kupararira kweCovid-19.
Nyanzvi Dzoshoropodza Mhirizhonga Yakaitika paCapitol Hill neMusi weChitatu
Mapato ezvematongerwo enyika emuZimbabwe ari kushora zvikuru mhirizhonga yakaitika paCapitol Hill muWashington DC, uye ari kukurudzira mutungamiri weAmerica, VaDonald Trump, kuti vatambidzane masimba murunyararo naVaJoe Biden veDemocratic Party.
Vanhu Vana Vanoyeredzwa neMuvra Vachiedza Kuyambuka Rwizi Mutirikwi kuChiredzi, kuMasvingo
Vanhu vana vakafa muzviitiko zvaiviri zvakasiyana kuChiredzi North mudunhu reMasvingo mushure mekunge vayeredzwa nemvura vachiedza kuyambuka rwizi Mutirikwi, urwo rwunonzi rwakangozozara zvechimbi-chimbi vanhu ava vave pakati.
VaBhasikiti Vanosiya Nyaya dzeMatongerwo Vachidira MDC Alliance Jecha Muziso
VaBhasikiti vanoti vatora danho iri nekuti havadi zvavo kushanda naVaMwonzora, vachiti zvichitevera kukunda kwavo musarudzo yekutungamira MDC-T, zvave pachena kuti MDC Alliance yave kutungamirwa naVaMwonzora nekuda kwekuti ndivo mutungamiri weMDC-T.
Rimwe Sangano Rakazvimirira Robatsira Vanhu kuMasvingo
Sangano reMasvingo Centre for Research Advocacy and Development, kana kuti MACRAD, rinoti rine zvirongwa zvakawanda zvekubatsira vanhu vemudunhu iri panguva ino vanhu vakawanda vave kutambura zvakanyanya nekuda kwekunzi vagare mudzimba munguva yekurwisa denda reCovid-19.